Joyina i-Airbnb ekunikezeni ngezindawo zokuhlala zabachayeke ngokwedlulele zabosizo lwe-COVID-19 abangu-100,000
Siza iqhawe lithole ikhaya
Nikela ukuze uxhase ukuhlala kwabantu bosizo abalwa bechayeke kakhulu ku-COVID-19. Sisebenzisana nezinhlangano ezingenzi inzuzo ukwenza isiqiniseko sokuthi iminikelo yakho iyafika kubantu abayidingayo.
U-100% uya kosiza abantu bosizo
Umnikelo wakho uzoya ezinhlanganweni ezingenzi nzuzo ezisiza izisebenzi zezempilo nabosizo olusheshayo ukuba bathole izindawo zokuhlala eduze neziguli zabo, noma baqhelelane ngokuphephile nemindeni yabo.
I-Airbnb yakha amathuluzi ezinhlangano ezingenzi inzuzo ukusiza abosizo lwe-COVID-19
Sisungule uhlelo olwenza izinhlangano ezingenzi inzuzo zithole izindawo zokuhlala zezisebenzi zezempilo nabezimo eziphuthumayo nge-Airbnb. Ngosizo lwakho, bangabhukha izindawo zokuhlala zabantu abaningi nakakhulu.